BBC Somali - Warar - Isaac oo ku dhufatay New Orleans
Isaac oo ku dhufatay New Orleans
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 29 Agoosto, 2012, 16:55 GMT 19:55 SGA
Darbi wayn oo lagu difaacayay deegaanka Braithwaite ee magaaladaas ayaa lagu soo waramay in uu jabay oo uu daad uu ku soo fatayay dhismayaal isla markaana dadka deegaanka la daadgureeyay.
Balse weriye BBC u jooga magaalada ayaa sheegay in inta badan waxyaabaha biyo celis loogu talogalay ay sidoodiiyihiin.
Todoba sano ayaa laga joogaa maalintii magaaladaas ay ku burburtay duufaan kale oo tan ka xoog badan oo loo yaqaanay Katrina.
Guud ahaan gobolka Louisiana, nus million qof ayaa koronto la'aan ah. Saraakiisha ayaa ku dhiirigalinaya dadwaynaha aan wali magaalada ka bixin in ay guryahooda joogaan ilaa inta dabayluhu ka degayaan.
Duufaanta New Orleans